Ciidamada Iswiidhen oo Afqaanistaan ku dilay dagaalyahano Al-Qaacida ka tirsan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Jan Collsiöö/TT
Ciidamada Iswiidhen oo Afqaanistaan ku dilay dagaalyahano Al-Qaacida ka tirsan
La daabacay torsdag 30 januari 2014 kl 14.30
Ugu yaraan laba dagaalyahan oo ka tirsan Al-Qaacida oo ay ciidamada militeriga iswiidhishku ku dileen dalka Afqaanistaan. Sidaasna waxaa maanta qoray wargeyska Svenska Dagbladet.
Wararka ku saabsan labadaan nin oo labaduna ka soo jeeda dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegaya in lagu dilay dagaal ay ciidamada iswiidhishka la galeen. Waxaana lagu soo bandhigay bog internet oo loogu magacdaray "taariikh-nololeedka shahiidiinta", boggaas oo qayb ka ah shabakadda jihaadiinta ee as-ansar dayrtii 2011.
Wararkaani waxay waafaqsan yihiin arrin dhab ah oo loo ogaa oo ahayd in guuto si gaar ah u tababaran oo ka tirsan ciidamada iswiidhishku ay lixdii bilood ee ugu horreysey sannadkii 2010 bilaabeen in ay qabqabtaan rag mucaarad ah oo ku sugan Afqaanistaan, sida uu qoray wargeyska Svenska Dagbladet.
Axaddii la soo dhaafay ayuu sarreeye guuto Urban Mohlin u sheegat wargeyska Dagens Nyheter in "dhawr dersin " oo afqaaniyiin ay ku dhinteen dagaalo dhexmaray iyaga iyo guutada qarsoodiga ah oo sida gaarka u tababaran oo loo soo gaabiyo SOG (Särskilda operationsgruppen).